ntroduction sy fampiharana ara-pahasalamana an'ny Laryngeal Mask Airway
tamin'ny admin tamin'ny 2021-07-01
Momba anay Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. dia naorina tamin'ny volana aogositra 2005. Any Haiyan County, Jiaxing, China no ivon-toeran'ny Delta Renirano Yangtze novolavola ara-toekarena ary akaikin'i Shanghai, Hangzhou ary Ningbo, ary koa toy ny Zhapugang-Jiaxing-Suzhou Expresswa ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-06-11
Rehefa tonga ny lohataona dia velona ny zava-drehetra. Tamin'ny 26 martsa 2021, ny Sampan-draharahan'ny Marketing an'ny Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. dia nanao hetsika fananganana ekipa tao amin'ny Farihin'i Nanbei. Samy nankafy ny hetsika ny rehetra tamin'ny alàlan'ny fihobiana, fifaliana, hafanam-po. Amin'ny 9 ora maraina, ny Marketing ...
2021CMEF: Kangyuan manatsara ny kalitaon'ny fiainana amin'ny siansa sy ny teknolojia
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-05-19
Tamin'ny 13 Mey 2021, natao tao amin'ny Foibem-pifanarahana sy fampirantiana nasionaly Shanghai ny foibe fampirantiana iraisam-pirenena iraisam-pirenena (CMEF) faha-84 mitondra ny lohahevitra "teknolojia vaovao, ho avy hendry". Miaraka amin'ny olona marobe manatrika ny fampirantiana, ny hakanton'ilay hetsika dia nihoatra ny fotoana rehetra teo aloha. ...
tamin'ny admin tamin'ny 2020-12-09
Ny faha 19/10/2020 no fanokafana lehibe ny tsenaben'ny International Equipment Equipment International (CMEF) faha-83 sy ny International Component Manufacturing & Design Show (ICMD) faha-30 ao amin'ny National Exhibition Center Shanghai. Betsaka amin'ireo orinasa an-trano tena tsara ampahany ...
Laryngeal mask airway (LMA) dia vokatra mahomby novolavolaina tamin'ny tapaky ny taona 1980 ary ampiasaina amin'ny fanatoranana ankapobeny mba hametrahana làlan-drivotra azo antoka. Ny làlan-tsarimihetsika laryngeal misy kalitao tsara dia manana tombony maro, toy ny mora ampiasaina, ny taham-pahombiazana avo lenta, ny rivotra azo atokisana, ...
Ahoana ny momba ny kateteran'ny kangyuan
Betsaka ny namana miasa eo amin'ny sehatry ny fihinana fanafody no manontany ahy, inona no antony mahatonga ny katetika any amin'ny kiy Kangyuan hanana laza tsara ary azo amidy tsara any Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana ary firenena maro hafa? Andao hiresaka momba azy io anio. Voalohany indrindra, ...